Tantara: Ny Safodrano Lehibe - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
TANY ivelan’ny ﬁara dia nanohy ny ﬁainany sahala amin’ny taloha ny olona. Mbola tsy nino ihany izy ireo fa ho avy ny Safodrano. Nety ho nihomehy mbola tsy nisy toy izany aza izy. Nefa vetivety dia nitsahatra ny ﬁhomehezany.
Nanomboka nilatsaka tampoka ny rano. Niraraka avy any an-danitra izany sahala amin’ny rehefa mandraraka rano avy amin’ny siny ianao. Marina ny ﬁlazan’i Noa! Nefa tara loatra izao ho an’izay te hiditra ao amin’ny ﬁara. Efa nohidian’i Jehovah mafy ny varavarana.
Vetivety dia rakotra ny toerana iva. Tonga sahala amin’ny renirano be ny rano. Natosiny ny hazo ary nakodiany ny vato be, no sady nanao tabataba be izy. Natahotra ny olona. Nananika ho amin’ny toerana avo kokoa izy. Raha izay mantsy izy ireo no mba nihaino an’i Noa sy niditra tao amin’ny ﬁara raha mbola nisokatra ho azy ireo ny varavarana! Diso aoriana loatra anefa izany izao.
Nihanisondrotra hatrany ihany ny rano. Niraraka avy any an-danitra ny rano 40 andro sy 40 alina. Niakatra hatramin’ny sisin’ny tendrombohitra izany, ary tsy ela dia rakotra na dia ireo tendrombohitra avo indrindra aza. Koa araka ny nolazain’Andriamanitra, ny olona sy ny biby rehetra tany ivelan’ny ﬁara dia maty. Fa izay rehetra tao anatiny kosa dia voaro.
Nanao asa tsara i Noa sy ny zanany lahy tamin’ny fanamboarana ny ﬁara. Ningain’ny rano izany ary nitsinkafona teo ambonin’ny rano. Indray andro àry, taorian’ny ﬁtsaharan’ny orana, dia nanomboka namiratra ny masoandro. Endrey ny fahitan-javatra tamin’izay! Ranomasimbe midadasika iray no hita hatraiza hatraiza. Ary ny hany zavatra azo nojerena dia ny ﬁara nitsinkafona teo amboniny.
Tsy tena olombelona tahaka antsika akory ny rain’ireo olona goavana. Anjely nidina tetỳ an-tany mba ho velona toy ny olona izy ireny. Noho izany, rehefa tonga ny Safodrano, dia tsy maty niaraka tamin’ny sisa amin’ny olona izy. Nitsahatra tsy nampiasa ny vatan’olombelona nananany izy ary niverina ho any an-danitra tamin’ny naha-anjely azy. Nefa tsy navela intsony ho anisan’ny ﬁanakavian’ny anjelin’Andriamanitra izy. Nanjary lasa anjelin’i Satana àry izy. Antsoina hoe demonia izy ireny ao amin’ny Baiboly.
Nisy rivotra nalefan’Andriamanitra mba hitsoka tamin’izay, ka dia nanomboka nihena ny ranon’ny Safodrano. Dimy volana tatỳ aoriana, ny ﬁara dia nipetraka teo an-tampon’ny tendrombohitra iray. Mbola nandalo ny andro maromaro, ary dia afaka nijery sy nahita ireo tampon’ny tendrombohitra ny olona tao anatin’ny ﬁara. Nihanidina hatrany ny rano.
Dia namoaka tany ivelan’ny ﬁara, vorona mainty iray antsoina hoe goaika i Noa. Nanidina tany vetivety izy io ary niverina, satria tsy nahita toerana tsara azony nipetrahana. Toy izany foana no nataony, ary isaky ny niverina izy io, dia niala sasatra tao amin’ny ﬁara.
Tian’i Noa ny hahita raha niala tamin’ny tany ny rano, ka dia nandefa indray voromailala iray tany ivelan’ny ﬁara izy. Niverina koa anefa ilay voromailala satria tsy nahita toerana hipetrahana. Nalefan’i Noa fanindroany izy io, ary niverina nitondra ravin’oliva teo am-bavany. Fantatr’i Noa àry fa efa nihena be ny rano. Nalefan’i Noa fanintelony ilay voromailala, ary farany izy dia nahita tany maina mba hipetrahana.
Niresaka tamin’i Noa izao Andriamanitra. Hoy izy: ‘Mivoaha amin’ny samboﬁara ianao. Ento miaraka aminao ny ﬁanakavianao manontolo sy ny biby.’ Efa ho herintaona mahery izao izy ireo no tao anatin’ny samboﬁara. Koa azontsika alaina sary an-tsaina àry ny hafalian’izy rehetra tafavoaka soa aman-tsara avy ao indray!
Nahoana no tsy nisy afaka niditra tao anatin’ilay samboﬁara, rehefa nanomboka nirotsaka ny orana?
Nandritra ny ﬁry andro sy ﬁry alina i Jehovah no nandatsaka orana, ary tonga hatraiza ny rano?
Nanao ahoana ilay samboﬁara, rehefa nanomboka rakotry ny rano ny tany?
Taiza no nisy ilay samboﬁara, rehefa afaka dimy volana?
Nahoana i Noa no namoaka goaika iray avy tao amin’ilay samboﬁara?
Inona no nolazain’Andriamanitra tamin’i Noa, rehefa avy nijanona herintaona mahery tao anatin’ilay samboﬁara izy mianakavy?
Afaka ﬁry andro ny rano vao nihena? (Gen. 7:24)
Ahoana no ampisehoan’ny Genesisy 8:17 fa tsy niova ilay ﬁkasan’i Jehovah tany am-boalohany momba ny tany? (Gen. 1:22)